Wararka - Waa maxay sanduuqa caafimaadka ee balaastigga ah
Waa maxay sanduuqa caafimaadka ee balaastigga ah
Sanduuqa Caafimaadka ee Caaga ah (sidoo kale loo yaqaan sanduuqa dawada) ama sanaadiiqda caafimaad ee balaastigga ah, ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa isbitaalada iyo qoysaska. Tan waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo dawooyinka, qalabka caafimaadka ama loo qaado si loo arko bukaanka.
Sanduuqa caafimaadka, sida magaciisaba ka muuqata, waa weel loogu talagalay keydinta daawooyinka iyo qalabka caafimaadka, oo la soo bixin karo loona isticmaali karo haddii xaalad jirto. Marka la barbardhigo xirmada caafimaadka, sanduuqa caafimaadka wuxuu leeyahay mug weyn iyo awood balaaran, oo laga yaabo inuu keydiyo waxyaabo badan. Xirmooyinka caafimaadka waxay kaydin karaan oo keliya walxaha degdegga ah hal mar oo la isticmaalo. Sanduuqyada caafimaadku way ka duwan yihiin maxaa yeelay waxay keydiyaan alaabooyin badan sababtoo ah baaxadooda weyn.
Kala soocida sanaadiiqda caafimaadka
Kala soocista adeegsiga
1. Sanduuqa caafimaadka ee Kaydinta Qoyska
2.Dhakhaatiirtu waxay wataan xirmooyinka caafimaad ee shaqsiga ah
3. Qalabka gargaarka degdegga ah
4. Sanduuqyada keydinta dawooyinka ee isbitaalada
5. Sanduuqa dawada ee caqliga badan
6.Desktop sanduuqa caafimaadka
7.Fahmiddu waxay isticmaashaa sanduuqa caafimaadka
8 Sanduuqa caafimaadka ee otomaatiga ah
Kala soocista qaabka iyo qaabdhismeedka
1. Sanduuq caafimaad oo fudud
Sanduuqa caafimaadka ee weyn
3. Sanduuqa caafimaadka badan
4 sanduuqa dawada xoojinta
Santuuqa weyn ee sanduuqa lagu keydiyo
Sanduuqa caafimaadka qoyska Qalabka gargaarka degdegga ah
Dhakhaatiirtu waxay wataan qalab caafimaad oo gaar ah
Sanduuqa caafimaadka Multidrawer & Multichamber
Sanduuq caafimaad oo fudud
Sanduuqa dawada ee caqliga leh Sanduuqa caafimaadka ee otomaatiga ah
Miis caafimaad oo loo yaqaan 'Desktop'
Isticmaal sanduuqa caafimaadka
Sanduuqyada keydinta dawooyinka ee isbitaalada
Waa maxay waxyaabaha caaga ah ee loo isticmaalo in lagu sameeyo qaybo ka mid ah sanduuqa caafimaadka?
Isbitaalada, waax ama nooc dawooyin ah iyo qalab wax lagu daweeyo ayaa badanaa lagu dhajiyaa hal ama dhowr xirmooyin gaar ah.
Foomkan oo ah noocyo dhammaystiran oo dawooyin ah ayaa go'an oo loo kala saaraa. Waxaa loo yaqaan sanduuqa caafimaadka.
Marka laga reebo sanduuqa caafimaadka ee loo isticmaalo goobta dagaalka ama heerkulka sare iyo cadaadiska sare ee bey'ada qaaska ah, inta badan sanduuqyada kale ee caafimaadka waxaa laga sameeyay balaastiig caag ah. Tusaale ahaan: sanduuqa dawada ee cisbitaalka, sanduuqa dawada guriga, sanduuqa dawada degdega ah iwm.
Waxyaabaha balaastigga ah ee aan guud ahaan u isticmaalno sameynta sanduuqa caafimaadka waa PP, ABS, PC.
Sifooyinka sanduuqa caafimaadka ee PP: awoodda ballaaran, miisaanka fudud, qiimaha wax soo saarka oo hooseeya tiro aad u tiro badan, waxay qaadi kartaa keydinta daroogooyinka kala duwan, qoyaan-caddeyn, ka-hortagga-dhadhanka Waxay ku habboon tahay keydinta daroogada guriga iyo isbitaalka.
Marka loo eego baahida loo qabo, qaybaha kale ee balaastigga ama birta ayaa loo isticmaalaa inay la jaan qaadaan qaybaha sanduuqa PP si loo xoojiyo ama loo siiyo howlo badan sanduuqa.
Sida laga soo xigtay adeegsadayaasha, deegaanka iyo keydinta daawooyinka ama aaladaha caafimaad, sanduuqa daawada wuxuu leeyahay qaabab kala duwan, cabirro iyo qaabab gudaha ah.
Waa maxay qaybaha caaga ah ee ku jira sanduuqa dawada?
Sanduuqa dawada oo inta badan ka kooban qaybo balaastig ah badanaa waxaa ku jira qaybaha caagga ah ee soo socda
3. Saxanka gudaha, sanduuqyada khaanadda
Farsamada wax taaj oo kale ee duritaanka iyo talooyin ku saabsan qaybaha sanduuqa caafimaad ee balaastigga ah
1. Guud ahaan, cabirka sanduuqa dawada ee fudud waa yar yahay, qaabkiisuna waa sahlan yahay. Daboolka kore, sanduuqa jirka iyo qaybaha gudaha guud ahaan waxaa laga samayn karaa caag PP.
2. Qaybaha dibedda ee sanduuqa dawada ee waxqabadka badan leh oo leh qaab dhismeed isku dhafan, ABS iyo qalabka PC-ga oo leh cabir deggan ayaa badanaa la isticmaalaa.
3. Qaybaha birta ah ee Aluminium ayaa mararka qaarkood lagu daraa si loo xoojiyo geesaha iyo geesaha sanaadiiqda daawada oo badanaa u baahan in la dhaqaajiyo.
4. Qoto-dheerida sanduuqa dawada ayaa xoogaa weyn, mana jiraan xoojin ku filan gudaha sanduuqa. ABS ama qalabka PC-ga ayaa loo baahan yahay.
5. Qalabka la isticmaalay waa inuu qanciyaa ROHS ama FDA. Kaydinta iyo isticmaalka qalabka waa in laga soocaa qalabka kale.
6. Mashiinnada duritaanka iyo bay'adda wax soo saarka waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah oo nadiif ah si ay ula kulmaan heerarka.
Xirmada caafimaadka waxay leedahay suuq ballaaran, wax soo saarkeeda waa inuu u hoggaansamo heerarka warshadaha qaarkood. Shirkadda Mestech waxay u samaysaa caaryo caag ah iyo wax soo saar sanduuqa caafimaad ee caagga ah.Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.